China DF-D / C နှစ်ဖက်တပ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ZHONO
DF-D / C ကို Double Facer
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးသည်မြင့်မားသောမြန်နှုန်းဖြင့်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအတွက်ခိုင်ခံ့သောကျယ်ပြန့်သောချည်မျှင်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ 2. Touch plate သည်အေးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အအေးခံပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်အလိုအလျောက်တည်ငြိမ်သောရုတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၃။ အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာတွင်ပုံသဏ္keepာန်ရှိစေရန်သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပြားများနှင့်အတူရေနွေးငွေ့အသုံးပြုမှုအချိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် S-shape airflow ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအမျိုးသားအပူဖိအားပေးမှုသင်္ဘောပုံစံအတိုင်းအပူပြားကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်သည်။ ၄ ။
2. Touch plate သည်အေးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အအေးခံပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်အလိုအလျောက်တည်ငြိမ်သောရုတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာတွင်ပုံသဏ္keepာန်ရှိစေရန်သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပြားများနှင့်အတူရေနွေးငွေ့အသုံးပြုမှုအချိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် S-shape airflow ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအမျိုးသားအပူဖိအားပေးမှုသင်္ဘောပုံစံအတိုင်းအပူပြားကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်သည်။
၅။ မောင်းနှင်သောအပိုင်းသည်မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုအတွက်ခါးပတ်၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ကြီးမားသောအချင်း anilox ဝတ်ဆင်နိုင်သောရာဘာကိုအသုံးပြုသည်။
၆။ အဓိကမောင်းနှင်သည့် ၀ င်ရိုးသည်မြန်ဆန်သောအန်ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီပြီး pasting machine နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၈။ သီးခြား drive box သည် bevel ဂီယာဖွဲ့စည်းပုံတွင်ရှိပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆူညံသံနှင့်ဆူညံသံနှင့်ထုတ်လွှင့်ထားသော torque အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လွယ်ကူသောမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဂီယာများရှိသည်။
၉။ ခရမ်းရောင် Cooper tubes များနှင့်လိုက်ဖက်သောသီးခြားရေနံ pumps များသည် bearing box နှင့် gear location များတွင် gear box ၏အသုံးပြုမှုသက်တမ်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်စီစဉ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းအမြန်နှုန်း (m / min) 100, 150, 200, 250, 300
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝ - အော်တို Die - ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
နောက်တစ်ခု: CSM-8 NC တစ်ခုတည်းသော - မြှောင်းပုံရိုက်စက်၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်စုပုံခြင်းစက်
CSM-8 NC တစ်ခုတည်းသော - မြှောင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း ...